Uncategorized – Page 64 – Shabakadda Amiirnuur
Xarakada Al Shabaab ayaa markale soo bandhigtay dufcadii labaad ee Ergadii soo xulay xildhibaannada baarlamaanka dowladda Federaalka Soomaaliya balse ka towbad keenay falkii ay kusoo xuleen xildhibaannada. Ergadaan oo isugu jiray rag iyo dumar ayaa ka kala yimid magaalooyinka Jowhar,Beled Weyne iyo Muqdisho dhammaantoodna waxay kamid ahaayeen kuwii xildhibaannada kasoo […]
Dhageyso Barnaamijka Diiradda Jimcaha oo Lagu Soo Qaatay Dhibaatooyin Xanuun Leh oo Ka Jira Gedo.
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qaraxyo saacadihii lasoo dhaafay deegaanno katirsan gobolka Shabeellaha Hoose lagula beegsaday ciidamada dowladda Federaalka iyo kuwa AMISOM. Qaraxa koowaad ayaa maanta barqadii ciidamo katirsan AMISOM gaar ahaan kuwa Uganda lagula beegsaday wadada isku xirta deegaannada Danoow iyo Golweyn oo dhammaantood katirsan Sh/Hoose. Ilo wareedyo […]
Ra’iisul wasaaraha Yahuudda Oo Xoog ku tagay Al-Khaliil.
Bin Yamani Natanyahu ayaa booqasho ku tagay magaalada Al-khaliil ee dhulka Filastiin, isagoona xoog ku galay masjidka Al-ibraahiimi ee ku yaala magaalada. Hadal uu ka jeediyay masjidka daahirka ah ayuu Natanyahuga Yahuudiga ah wuxuu ka dhex sheegay in Yahuudu ay weligood joogi doonaan magaalada Al-khaliil, oo aysan jirin meel ay […]
Waaliga Hiiraan oo Waraysi siiyay Al-Furqaan.(Dhagayso)
Sheekh Guuleed Abuu Nabhaan oo ah waaliga wilaayada islaamiga Hiiraan ayaa waraysi gaar ah oo uu siiyay Idaacadda islaamiga ee Al-Furqaan ayuu kaga hadlay arimo kala duwan oo quseeya Wilaayada. Abuu Nabhaan, wuxuu sheegay in wilaayadu ka jiraan horumarro ballaaran, dadkuna ay usoo xukun tagayaan kitaabak Allaah, taas oo uu […]
Habeennimadii xalay, rag naftood huriyaal ah oo katirsan Imaarada islaamiga ee Afqaanistaan ayaa weerar culus ku qaaday xaafad ku taalla bartamaha magaalada Kaabul, oo u gaar ah hay’adaha Shisheeyaha ee qeybta ka ah duulaanka wadankaas ay ku qaadeen ururka NATO. Nafti hure katirsan Dhaalibaan ayaa qarax ku daah furey weerar […]